8 BEERAHA QALADAADKA AASAASIGA AH - WARARKA
Meelaha beertaada kuu gaarka ah waxaad sameyn kartaa go'aano kala duwan.
Go'aankani wuxuu noqon karaa mid wax akhrin kara, oo aan dhammaystirnayn wax akhrin, iyo iyada oo aan loo eegin waayo-aragnimada, labadaba waa la sameyn karaa.
Sidaa daraadeed, si aad u ogaatid ficil-gooyooyinka aasaasiga ah ee loo dulqaadan karo waa arrin khuseysa labada bilawga iyo beerta khibrad leh.
Mowduucani waa kuwa ugu khuseeya beeraleyda, maadaama ay saameeyso dhinacyo badan oo ku saabsan daryeelka caafimaadka.
Haddii dhirta dhaadheer yihiin, waxay noqdaan kuwo u nugul cayayaanka.
Haddii aanad wax badan ku darin, waxay bilaabaan inay isdifaacaan oo ay noqdaan kuwo firfircoon.
Xaqiiqdii, halkan waxaad ka dhigan kartaa mid la mid ah bani-aadminnimada aadanaha, oo ka soo jeeda cuntooyinka badankoodu waxay noqdaan kuwo ciriirsan, oo ay u soo baxaan cudur, iyo iyada oo ay ka maqan tahay waxay noqotaa mid jilicsan.
Just si aad u fahamto tirada dhirta ay ku habboon tahay waa wax aad u adag.
Sidaa darteed, waa inaad isticmaashaa talooyin si aad u hagaajisid waraabinta.:
waraabinta subaxdii - waa xulashada ugu wanaagsan, sidaas darteed dhirta ayaa heli doona qoyaan more;
Mulching - tusaale ahaan, cows ayaa kaa caawin doona inaad caawiso dhirta;
kaliya hoosta xididada - asliga ah uma baahnid in la waraabiyo, ku shub wareega xididdada geedka;
ciid iyo dhoobo - dhoobo dhoobo u baahan tahay waraabin yar, carrada ciidda leh waxay u baahan yihiin in la waraabiyo marar badan;
dheecaan iyo waraabinta - haddii ay suurtagal tahay, samee dheecaan dhirta, iyo in la hagaajiyo waraabka, ku rakib nidaamka waraabka waraabka.
Gaar ahaan waxaa lagama maarmaan ah in la xoojiyo waraabka faleebada iyo isticmaalka mulching. Nidaamyadani waxay u fiicnaan doonaan waraabinta.
Dabcan, mararka qaarkood waxaad rabtaa xoogaa qalaad, laakiin doorashadan maahan beerta. Halkan waxaad u baahan tahay inaad doorato dhirta ku habboon gobolkaaga. Si aad u koriso dhirta aan buuxin shuruudaha dhulkiina waa wax aan fiicnayn.
Xitaa agagaarkaaga waxaa ku yaala dhir badan oo cajiib ah oo xiiso leh. Fiiri noocyada noocaan ah iyo koraan geedaha dabiiciga ah ee hore u koray xaaladahaaga.
Ka dib markaad doorato dhirta gobolkaaga ee aad rabto inaad koro, fiiri pH ee ciiddaada.
Ka dib markaa, fiiri dhirtu waxay u fiican yihiin pH-kaaga.
Dabcan, waad isku hagaajin kartaa calaamaddan waxoogaa yar, laakiin sababta aad u baahan tahay shaqo dheeraad ah, marka aad si fudud u doorato dhirta u habboon fiyuuskan.
Ku saabsan carrada, xusuuso nooca carrada ee booskaaga.
Badanaa waxaa jira ciidda ciidda leh ama ceelka leh oo leh jajab khaas ah iyo heerka darnaanta.
Xaaladdan, xulashada ugu fiican waa carrada madow, taas oo dhif ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad hagaajin kartaa tayada ciidda, waana runbaa lugu talinayaa inaad qabato shaqo noocan oo kale ah. Ujeedadaas awgeed, digada iyo compotes ayaa loo isticmaalaa, kuwaas oo si joogto ah loogu daraa ciidda.
Xitaa haddii aad si fiican u qorsheyn karto arrimahaaga oo aad maamuli karto wakhti kuu gaar ah, waxaad badanaa ku dhajin kartaa fursadaha kuu gaarka ah ee ku saabsan beertaada.
Marka ugu horeysa waxay u egtahay in la qabanayo shaqada oo dhan waa mid sahlan, laakiin dhammaadka waxay qaadataa waqti badan.
Sidaa darteed, marka hore waa inaad xisaabisaa inta goor tahay ama tan dhirta u baahan tahay, intee le'eg ayaa loo baahan yahay shaqo dheeraad ah.
Ka dib markaa, abuur oo beerta beertaada.
Waxaa laga yaabaa in ay ka fiican tahay xitaa ka tagto waqti dheeraad ah naftaada, maxaa yeelay beerta aad marwalba ka heli kartaa wax aad qaban karto.
Waxay khusaysaa, gaar ahaan marka ay timaado beeritaanka dhirta qaybo kala duwan oo beerta ah. Waa inay had iyo jeer bixisaa cabbirka ugu sareeya ee warshad kasta, xitaa markaad beerto kaliya jirid. Haddii dhirtu aanay lahayn meel bannaan, way ka sii dari doonaan.
Intaa waxaa dheer, wadarta guud ee beerta waxay u eegi doontaa si ka fiican haddii ay tahay mid aad u ballaaran. Geedaha waxay u baahan yihiin hawo iyo iftiin ku filan.
Waa lagama-maarmaan in la kala saaro dhirta u baahan in badan oo iftiin ah iyo dhirta in iftiinka uusan ahayn mid aad u muhiim ah. Ka dib markaa, waxaad u baahan tahay inaad aragto halka ay ku yaalaan meelo iftiin leh iyo meelo yaryar oo bannaan. Iftiiminta waxaa la fahamsan yahay in ay tahay goob sida nalalka la socdo ugu yaraan lix saacadood maalin kasta.
Ka dib markaa, waa in la go'aamiyaa halka ay ku beeri karaan dhirta. Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso shaatiinka dhirta kale.
Waxaad dhab ahaantii u baahan tahay inaad si cad u fahamtid sida loo isticmaalo beertaada, sida aan u dhaqmaynin xilli go'an, laakiin sannad ilaa sannad.
Tusaale ahaan, waxaad ubaahan tahay inaad bedesho goobta dhirta si loo siiyo ciidda nasasho. Waxaa jira faahfaahin kale oo badan oo aad u baahan tahay inaad u fiirsato oo aad abuurto qorshe cad.
Ka hortagga beerta waa daaweyn aad u fiican iyo sidoo kale daawada. Sidaa darteed, aqoonsadaan oo isticmaalaan hababka ka hortagga. Tusaale ahaan, mulching waqtigii dhirta ayaa kuu oggolaanaya inaadan la dagaallamin haramaha iyo sifeynaya waraabinta.
Ugu dambeyntii, waa in la ogaadaa baahida loo qabo in la tixgeliyo talooyinkan ma aha sida shaqada ama wax la mid ah, laakiin sida habka lagu hagaajin karo hawlahaaga. Haddii aad daaweynayso beerta sida farshaxanka iyo madadaalada dibadda, markaa ma aha inaad ku raaxaysato oo keliya waxqabadka, laakiin sidoo kale waxay gaareysaa natiijo sare.